Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo Shaacisay In Sabtida iyo Axada Ay Shaqaaluhu Fasax Ahaan Doonaan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo Shaacisay In Sabtida iyo Axada Ay Shaqaaluhu Fasax Ahaan Doonaan
Published on August 30, 2017 by sdwo · No Comments
Hargasya (SDWO): Hay’adda shaqalaha dawladda jmahuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay in maalmaha Sabtida iyo Axada ee soo socda ay shaqaalaha dawladu fasax ka ahaan doonaan shaqadda, munaasibadda Ciidul-Adxa awgeed.
Guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Somaliland Sharmaarke Axmed Muxumed, ayaa sheegay in Ciidul-Adxa ay ku beegan tahay maalinta Jimcaha ee 10-ka bisha Dul-xaj sanadka 1438-ka ee taariikhda islaamka, isla markaana waafaqsan 1-da bisha September 2017-ka.
Sharmaarke Axmed Muxumed, oo maanta hadal ka jeediyay xaflad tababar loogu soo xidhayay 28 shaqaale cusub ah oo dhawaan ku soo baxay imtixaan ay hay’adda shaqaalaha dawladu ka qaaday, shaqaalahaasi oo ka hawl geli doonna wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska.
Waxaanu yidhi “Waxaan doonayaa in aan halkan ka iclaamiyo in maalinta Jimcaha oo ah maalin ciidda in ay fasaxii Ciidda noqon doonto, labadda maalmood ee Sabtida iyo Axada oo Jimcaha ku xigana ay noqon doonaan maalmo fasax, maalinta Isniinta ahna ay noqon doonto maalin shaqo”.
Sidoo kale guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda waxa uu sheegay in Khamiista beri ay shaqaalaha dawladu shaqayn doonaan maalin badhkeed, maadaama oo maalinta Yowmul Carafa ay dadka muslimiinta ah badankoodu Sooman yihiin.
“Beri oo Khamiis ah, oo yowmul Carafa oo dadka intoodda badani ay Soomayaan, waxay shaqaalaha dawladu shaqayn doonaan maalin badhkeed” ayuu yidhi guddoomiye Sharmaarke.